Numeri 13 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
13 Wathetha ke uYehova kuMoses, esithi: 2 “Thumela amadoda aye kuhlola ilizwe lakwaKanan, endibanika lona oonyana bakaSirayeli.+ Nothumela indoda ibe nye kwisizwe ngasinye sooyise, nganye ibe yesisikhulu+ kuso.” 3 Wawathuma ke uMoses esentlango yaseParan+ ngokomyalelo kaYehova. Onke loo madoda ayeziintloko zoonyana bakaSirayeli. 4 Ngawo la amagama awo: kwisizwe sakwaRubhen, nguShamuwa unyana kaZakure; 5 kwisizwe sakwaSimeyon, nguShafati unyana kaHori; 6 kwisizwe sakwaYuda, nguKalebhi+ unyana kaYefune; 7 kwisizwe sakwaIsakare, nguIgali unyana kaYosefu; 8 kwisizwe sakwaEfrayim, nguHosheya+ unyana kaNun; 9 kwisizwe sakwaBhenjamin, nguPalti unyana kaRafu; 10 kwisizwe sakwaZebhulon, nguGadiyeli unyana kaSodi; 11 kwisizwe sakwaYosefu,+ esisisizwe sakwaManase,+ nguGadidi unyana kaSusi; 12 kwisizwe sakwaDan, nguAmiyeli unyana kaGemali; 13 kwisizwe sakwa-Ashere, nguSeture unyana kaMikayeli; 14 kwisizwe sakwaNafetali, nguNabhi unyana kaVofesi; 15 kwisizwe sakwaGadi, nguGewuweli unyana kaMaki. 16 Ngawo lawo amagama amadoda awawathumayo uMoses ukuba aye kuhlola ilizwe. Waza uMoses wambiza uHosheya unyana kaNun ngokuthi nguYehoshuwa.+ 17 Ekuwathumeni kwakhe uMoses ukuba aye kuhlola ilizwe lakwaKanan, wathi kuwo: “Nyukani apha niye eNegebhi,+ ninyukele kummandla weentaba.+ 18 Yaye nimele nibukhangele ubunjani belizwe+ nabantu abahlala kulo, ukuba bomelele okanye babuthathaka kusini na, nokuba bambalwa okanye baninzi kusini na; 19 ukuba linjani na ilizwe abahlala kulo, enoba lihle okanye libi kusini na, nokuba zinjani na izixeko abahlala kuzo, enoba basezinkampini okanye basezinqabeni kusini na; 20 ukuba linjani na ilizwe elo, enoba lichumile okanye alichumanga+ kusini na, nokuba linemithi okanye alinayo kusini na. Yibani nesibindi,+ nize neziqhamo zelo lizwe.” Yaye ke loo mihla iyimihla yentlahlela yeediliya.+ 21 Enyuka ke alihlola ilizwe ukususela kwintlango yaseTsin+ ukusa eRehobhi+ ngasekungeneni eHamati.+ 22 Ekunyukeleni kwawo eNegebhi,+ afika eHebron.+ Kwaye kukho apho uAhiman, uSheshayi noTalemayi,+ abenzala ka-Anaki.+ Kwaye ke, iHebron+ le yayakhiwe kwiminyaka esixhenxe ngaphambi kweTsowan+ yaseYiputa. 23 Akufika entlanjeni yakwaEshkoli,+ anqumla khona ihlumelo elinesihloko esinye seediliya.+ Asithwala ngesibonda engamadoda amabini, yaye enjenjalo nakwirharnati+ kwanakumakhiwane. 24 Ayibiza loo ndawo ngokuba yintlambo yakwaEshkoli,+ ngenxa yesihloko eso basinqumla khona oonyana bakaSirayeli. 25 Ekugqibeleni abuya ekulihloleni ilizwe ekupheleni kweentsuku ezingamashumi amane.+ 26 Ngoko ahamba afika kuMoses nakuAron nakwindibano yonke yoonyana bakaSirayeli entlango yaseParan, eKadeshe.+ Azisa ilizwi kubo nakuyo yonke indibano, ababonisa neziqhamo zelizwe elo. 27 Amxelela athi: “Singenile kwelo lizwe ubusithume kulo, kwaye eneneni liqukuqela ubisi nobusi,+ nazi neziqhamo zalo.+ 28 Noko ke, inyaniso yona yeyokuba bomelele abantu abahlala kwelo lizwe, nezixeko ezinqatyisiweyo zikhulu kakhulu;+ kwakhona, sibone nabenzala ka-Anaki khona.+ 29 Ama-Amaleki+ ahleli kwilizwe laseNegebhi,+ kwaye amaHiti namaYebhusi+ nama-Amori+ ahleli kwimimandla yeentaba, wona amaKanan+ ahleli ngaselwandle ngakwicala laseYordan.” 30 Noko ke uKalebhi+ wazama ukubazolisa abantu phambi koMoses wathi: “Masinyuke singqale, silihluthe, ngokuba ngokuqinisekileyo sinako ukuloyisa.”+ 31 Kodwa amadoda awayenyuke naye athi: “Asinako ukunyuka siye kumelana naba bantu, kuba bomelele kunathi.”+ 32 Kwaye aqhubeka edlulisela ingxelo embi+ koonyana bakaSirayeli ngelo lizwe ayelihlolile, esithi: “Ilizwe, esadlula kulo silihlola, lilizwe elibadla libagqibe abemi balo; nabantu bonke esababonayo kulo babengabafo abakhulu ngokungaqhelekanga.+ 33 Sazibona khona iiNefili, oonyana baka-Anaki,+ abavela kwiiNefili; sasuka emehlweni ethu saba njengeentethe, sanjalo nasemehlweni abo.”+